Sirta Caafimaadka Iyo Soonka Bisha Ramadaan! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Sirta Caafimaadka Iyo Soonka Bisha Ramadaan!
Ivan Petrovich Pavlov, waa aqoonyahan u dhashay dalka Ruushka. Wuxuu waalid ka yahay aqoonta ku beegan dheecaanadaas iyo danqashada qanjirada ay ka yimaadaan. Tijaabo uu sameeyay qarnigii tegay bilowgiisii, ayuu ku guuleystay in uu soo bandhigo faallo la xiriirta dheecaamada caloosha ku qubto iyo in raashinka oo keliya uusan ahayn waxyaabaha sababa in ay soo qubtaan. Tijaabadiisii wuxuu u doortay ey uu qafis geliyay. Dabadeed halkaas ayuu muddo ku quudinayay. Markasta oo eyga uu raashin siinayo wuxuu ka hor marin jirey koor (gambaleel) uu yeersho oo eyga uu maqashiiyo. Markuu muddo sidaas ku waday ayuu eygii calooshiisii qalliin ku sameeyay. Wuxuu ku xiray tubo yar oo dibadda u soo baxsan, taas oo gaarsiisan gudaha caloosha. Afkii tubada ee dibadda yiil, quraarad ayuu la xiriirshay. Wuxuu helay, markasta oo oo koorta uu ka dhawaajiyo, in dheecaanadii ay soo qubanayaan, iyada oo aanan eygii la siin wax raashin ah. Waxaa halkaas laga ogaaday in ay jiraan cimilo aanan ahayn raashin la qaato oo dheecaanada ay ku soo quban karaan. Sannadkii 1904-tii, I.P. Pavlov, tijaabadiisaas ayuu ku qaatay shahaadada abaal-gudka ee loo yaqaan Nobel Prize.
” …. inaad soontaan ayaa idiin wanaagsan, haddaad tihiin kuwo wax garanaya “.
Xataa haddii uu jiro cudur-daar lala afuro, waxaa u wanaagsan qofka in uu soomo. Waayo soonka isaga ayaa caafimaadka xoojinaya, cuduradana ka hor-tegaya. Eebow adigaa ku mahad leh nicmadahaaga aan la koobi karin. Adigaa ku mahad leh diintaada aad nagu galladday. Adigaa ku mahad leh inaad noo dooratay umaddii nebigaaga Maxamad ah.